I-diuretics kunye ne-statins: Amachiza athandwa kakhulu ngoJulayi - Inkampani | Eyenkanga 2021
Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi Inkampani Imfundo Yezempilo Impilo Imfundo Yezempilo, Impilo Impilo-Ntle Iindaba Uluntu, Inkampani Imidlalo Enzima Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo
Eyona >> Inkampani >> Ezona ziyobisi zidumileyo kwi-SingleCare ngoJulayi
Ezona ziyobisi zidumileyo kwi-SingleCare ngoJulayi
Unokucinga ukuba imigqaliselo yezifo eziqhelekileyo zasehlotyeni- njenge indlebe yokuqubha , Ukulunywa ziibug , okanye ityefu ye-Ivy -Iya kuba yeyona idumileyo ngenyanga kaJulayi. Ungaphandle, wonwabele ichibi okanye ulwandle, kwaye ubonakalise yonke irhashalala kunye nokuhlaba kwendalo ekufuneka ikunike. Nangona kunjalo, ezi klasi zimbini zeziyobisi ezikhulayo ehlotyeni kwi-SingleCare ikakhulu zinxulumene nemicimbi yeentliziyo: i-diuretics kunye ne-antihyperlipidemics (ngakumbi ii-statins).
Ngelixa iingxaki zentliziyo isenokungabi yinto yokuqala ethi qatha engqondweni xa ucinga ngexesha lasehlotyeni, imozulu eshushu inokucinezela inkqubo yentliziyo njengoko umzimba wakho uzama ukuhlala upholile. Oku kunokuchaphazela impilo yentliziyo kunye noxinzelelo lwegazi-iimeko ezimbini la mayeza anceda ukulawula.
Lawa ngamayeza aphezulu e-5 kwicandelo ngalinye kuJulayi, ngokweedatha ze-SingleCare.
IHydrochlorothiazide (i-generic prescription ngokubanzi isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kodwa inokusetyenziswa njengonyango oluchanekileyo lwe-edema, okanye ukugcinwa kwamanzi)
Furosemide (i-Lasix eqhelekileyo)
I-Spironolactone (Aldactone eqhelekileyo)
Triamterene / hydrochlorothiazide (generic Dyazide)
IChlorthalidone (i-generic prescription ngokubanzi isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kodwa ingasetyenziselwa unyango oluchanekileyo lwe-edema)
I-Atorvastatin calcium (i-generic Lipitor)
Simvastatin (Uhlobo oluqhelekileyo lweZocor)
I-Pravastatin sodium (IPravachol yesiqhelo)
IRosuvastatin calcium (ICrestor eqhelekileyo)
ILovastatin (generic Altoprev)
La mayeza amayeza asetyenziselwa ukunciphisa umngcipheko wokubetha, isifo sentliziyo, kunye nezinye iingxaki zentliziyo kubantu abanesifo seswekile, isifo sentliziyo, okanye ezinye izinto ezinobungozi.
Kutheni i-diuretics ithandwa kakhulu ngoJulayi?
I-diuretics, ekwabizwa ngokuba ziipilisi zamanzi, lelinye lawona mayeza aqhelekileyo amiselweyo kwiimeko ezininzi zonyango ukusuka kwisifo sentliziyo ukuya kuxinzelelo lwegazi, utsho UAnita Gupta, DO, Pharm.D., MPP , unjingalwazi oncedisayo oncedisayo we-anesthesiology kunye nokunyanga okunyanga kakhulu kunye neyeza leentlungu kwisikolo iYunivesithi iJohn Hopkins. Eli qela lamayeza ligcina umsebenzi wezintso wokuphelisa isodiyam kunye namanzi emzimbeni ngelixa ulinganisa umthamo wegazi ngokukhuselekileyo, uyacacisa.
Kukho iindidi ezahlukeneyo ze-diuretics, kwaye amayeza athandwa kakhulu kwi-SingleCare amele ezintathu ze-diuretics eziqhelekileyo: i-loop diuretics (furosemide), i-thiazide diuretics (i-hydrochlorothiazide, i-chlorthalidone), i-potassium-sparing diuretics (spironolactone, triamterene). Iklasi nganye isebenza ngokwahlukileyo ukunceda izintso zakho ziphelise amanzi kunye netyuwa-kwaye enye, spironolactone , inokusetyenziselwa ngaphandle kwelebheli ukunyanga amabala.
Izigulana eziye zafunyaniswa zinesifo sentliziyo, uGqirha Gupta uthi, baya kuhlala befuna la mayeza okusindisa ubomi ukuze kugcinwe ulungelelwaniso lwamanzi olwaneleyo. Ukungaphumeleli kwentliziyo yimeko enzima eyenzekayo xa intliziyo ingakwazi ukumpompa igazi kunye neoksijini eyaneleyo; ichaphazela malunga ne-6.5 yezigidi zabantu abadala e-US, ngokwe Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) . Aba bantu kunokwenzeka ukuba bahlupheke ngenxa ye-edema (okanye ulwelo oluninzi oluvaleleke ngaphakathi kwezicubu zomzimba) kwaye i-diuretics inokunceda ukugcina uxinzelelo lwegazi olusempilweni ukuze intliziyo ikwazi ukumpompa igazi ngentliziyo ngexesha lokubetha kwentliziyo nganye.
U-Linda Girgis, MD, i-FAAFP Ugqirha wosapho oqinisekisiweyo wasebhodini kwimisebenzi yabucala eSouth River, eNew Jersey, kunye nonjingalwazi oncedisayo eklinikhi eRutgers Robert Wood Johnson Medical School, uthi amaqondo obushushu ashushu ngoJulayi anokukubi ukudumba emilenzeni, emaqatheni nasezinyaweni — Iimpawu eziqhelekileyo ze-edema. Kungenzeka ukuba le ngxaki ingenza ukuba abantu abadala bafune unyango, uyaqhubeka. Iyavakala into yokuba oogqirha bamisele i-diuretiki ngakumbi ehlotyeni.
Ezinxulumene: Bumex vs Lasix: Umahluko ophambili kunye nokufana
Kutheni amayeza e-cholesterol ethandwa ngoJulayi?
Iiarhente ze-antihyperlipidemic zibandakanya udidi oludumileyo lwamayeza abizwa ngokuba yi-HMG CoA reductase inhibitors, eyaziwa ngokuba yimimiselo. Zisetyenziselwa ukuthoba amanqanaba e-cholesterol amabi-okanye i-LDL, ucacisa uGqirha Gupta. Banokunciphisa amanqanaba e-triglyceride kwaye bandise i-cholesterol elungileyo-i-HDL. La mayeza abalulekile ngezizathu ezibini: Inye, yehlisa i-cholesterol, kwaye ezibini, inokukhusela intliziyo kwisifo sentliziyo, uyaqhubeka. Ngapha koko, uphando lubonakalisile ukuba ii-statins zinokuba luncedo ekukhuseleni ukuqina kwemithambo, ukuthintela ukubetha kunye nokuhlaselwa sisifo sentliziyo, kunye nokwandisa ixesha lokuphila.
Ezona statins zixhaphakileyo kwi-SingleCare ngoJulayi (atorvastatin calcium, simvastatin, pravastatin sodium, rosuvastatin calcium, lovastatin) onke amayeza enziwe afana nalawo enziwe ngumenzi afundwa kakuhle, kwaye athathelwa ingqalelo umgangatho wegolide Unyango lwe-cholesterol ephezulu. Intsingiselo, kudala bekhona kwaye bathathwa njengekhuselekileyo kwaye olusebenzayo uninzi lweengcali zonyango.
I-cholesterol ephezulu (i-hypercholesterolemia) —isimo sentliziyo esingenazo iimpawu okanye iimpawu kwaye senzeka xa umzimba une-cholesterol eninzi ye-LDL (i-cholesterol ethwalwa yi-low-density lipoprotein) -ukuchaphazela umntu omnye kwabathathu baseMelika, utshilo i-CDC . Ngoku ka Iinkcukacha-manani zakutshanje zearhente , Abantu abadala abazizigidi ezingama-95 ngaphezulu kweminyaka engama-20 banamanqanaba e-cholesterol aphakamileyo kunoluhlu oluqhelekileyo (200 mg / dL), apho kuqikelelwa ukuba izigidi ezingama-29 zabantu abadala banamazinga aphezulu kunama-240 mg / dL. Nabani na ophila ne-cholesterol ephezulu unobungozi obandayo isifo sentliziyo , oyena nobangela uphambili wokufa.
Ngokubhekisele kwimimiselo, ngaphezulu kwesigidi se-11 saseMelika sithatha eli klasi leziyobisi kwisifo se-atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD), ngokwezibalo ezisuka kwezona zangoku. UPhando lweSizwe lwezeMpilo kunye neZondlo . UGqirha Girgis ucacisa ukuba ukonyuka kwemigqaliselo kunokuqhagamshelwa kwizigulana ezifanayo ezijongana nemilenze yokudumba ngoJulayi.
Sihlala sisenza umsebenzi wegazi kwizigulana ezine-edema ukulawula ezinye iingxaki, ezinjengesibindi okanye isifo sezintso, ukuphazamiseka kwethyroid, kunye nokungaqhelekanga kwe-electrolyte, utshilo. Kungenzeka ukuba oogqirha bafumanisa iimeko ezininzi ze-cholesterol ephezulu xa besenza ezilebhu, ezinokuthi zichaze ukunyusa amayeza okunciphisa i-lipid, ngokunjalo.
Ugqirha Girgis wongeza ukuba abantu baseMelika abagugileyo banokuba sesinye isizathu sokuba abantu abanamakhadi e-SingleCare bagcwalise eminye imigqaliselo yeziyobisi ze-diuretic kunye ne-antihyperlipidemic. Njengoko abantu bekhula, sinokulindela ukuba ukusetyenziswa kwala mayeza kuya kwanda, ngoko mhlawumbi kungumqondiso wokunyuka kancinci.
Ezinxulumene: Iziphumo ezine ezichaphazelekayo zestatins (kunye nendlela yokulwa nazo)
Nxibelelana neqela lakho lokhathalelo lwempilo
Ngokubanzi, uGqirha Gupta uthi i-diuretics imiselwe ixesha elide kwiimeko ezingapheliyo ezifana noxinzelelo lwegazi, ukusilela kwentliziyo, okanye isifo sezintso. Abantu abakwi-diuretics banokufuna ukubekwa esweni kwe-potassium kunye nokusebenza kwezintso, utshilo. Kubalulekile ukuba uzilinganise rhoqo xa uthatha i-diuretics yokusilela kwentliziyo, eya kuthi incede ukujonga ukugcinwa kwamanzi emzimbeni wakho okanye nokulahleka okungaphezulu. Ngaphandle kokuba ucetyiswe ngugqirha wakho, nxibelelana nabo ukuba ubunzima bakho bonyuka ngaphezulu kweepawundi ezintathu ngosuku okanye iiponti ezintlanu kwiveki, okanye ukuba ulahlekelwe kakhulu, icebisa yeenkca.gov (iwebhusayithi eveliswe yiLayibrari yeSizwe yaseMelika yezeMithi).
Ukuba ufunyaniswe unamazinga aphezulu e-cholesterol, uGqirha Gupta ucebisa ukuba abe novavanyo lomngcipheko ukumisela ukuba ngaba ii-statins lunyango olufanelekileyo lokucinga ngokusebenzisa ixesha elide. Kuba umngcipheko unokutshintsha ngokuhamba kwexesha, ukuxoxa ngoku nogqirha wakho kunokunceda ukufumanisa ukuba ngaba amayeza aya kufunwa ixesha elide, utshilo.
Ukusebenza ngokusondeleyo nomboneleli wakho wezempilo, unokugcina impilo yentliziyo ngehlobo nangaphaya.
9 Best Deals Ibhrashi yamazinyo Cyber ​​NgoMvulo Deals
Lukhangela ntoni uvavanyo lwegazi lwe-tsh
xa uthatha i-antibiotics indlela yokuthintela usulelo lwegwele
zingaphi iivithamini zegummy ezithathayo ukugqithisa
Ihlala ixesha elingakanani impumlo exineneyo
Ngaba unokuntywila ngesifo segwele